डा. केसी बागबजारस्थित नेपाल चिकित्सक संघको भवनबाट १७ औँ अनशन तयारीमा - Everest Dainik - News from Nepal
डा. केसी बागबजारस्थित नेपाल चिकित्सक संघको भवनबाट १७ औँ अनशन तयारीमा
काठमाडौंः प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सोमबारदेखि १७ औँ अनशन सुरु गर्ने भएका छन् । १६ औँ अनशनसम्म सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले अनसन थाल्न लागेका हुन् ।
१६ औं अनसन इलाममा बसेका डा. केसी १७ औँ अनशन भने नेपाल चिकित्सक संघको भवन प्रदर्शनीमार्गमा बस्न लागेको बताइएको छ । यद्यपि संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठले केही दिन पहिला संघको कार्यालयमा बस्ने कुरा भएपनि निश्चित भइनसकेको बताए । डा। केसी संघको अजीवन सदस्य समेत हुन् ।
याे पनि पढ्नुस थप ३२ जनामा कोरोना पुष्टि
यस्ता छन् डा। केसीको १७ औँ अनशनका मागहरुः
ट्याग्स: १७ औँ अनशन, डाक्टर गोविन्द केसी, नेपाल चिकित्सक संघ